दु:खद खबर! काभ्रेमा बस दुर्घटना २४ जनाको मृत्यु - Arghakhanchi Saptahik
दु:खद खबर! काभ्रेमा बस दुर्घटना २४ जनाको मृत्यु
काभ्रेको विर्ता देउराली गाविसमा यात्रु बस दुर्घटना हुँदा कम्तिमा २४ जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा चालीस जना घाइते भएका छन्। काठमाडौंबाट मादनकुडारी जाँदै गरेको बा ३ ख १०६ नम्बरको बस उकालोबाटोमा ब्याक भएर सडकबाट तल भीरमा खसेको हो ।
स्थानीय र प्रहरी उद्धार कार्यमा सक्रिय छन् । घटनास्थलमा रहेका स्थानीय पुष्करराज पन्तले अनलाइनखबरसँग भने, ‘२४ जनाको शव फेला परेको छ । घाइतेहरुलाई उद्धार गरी माथि ल्याइरहेका छौं । घाइतेहरु अधिकांशको अवस्था गम्भीर छ ।घाइतेलार्इ थप उपचारका लागि काठमाडाैं ल्याउन नेपाली सेनाकाे हेलिकप्टर मगाइएकाे काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीले जानकारी दिएका छन् । गम्भीर घाइतेलार्इ हेलिकप्टरबाट काठमाडाैं ल्याइने छ ।
घाइतेहरूलार्इ अस्पताल लैजान ५ वटा एम्बुलेन्स घटनास्थलमा पुगेका छन् । एम्बुलेन्सबाट तुलनात्मक रूपमा कम घाइतेलार्इ नजिकैको अस्पतालमा लगिनेछ। घटना दिउँसो एक बजेतिर भए पनि झण्डै एक घण्टापछि मात्रै प्रहरी टोली आइपुगेको थियो । प्रहरी निरीक्षक नरेश महतो नेतृत्वको टोली घटनास्थलमा उद्धारमा खटिएको छ ।घाइतेहरुलाई छिटो उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुर्‍याउन हेलिकोप्टर आवश्यक परेको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीयले हेलिकोप्टर आउने आशमा घटनास्थल नजिक हेलिप्याड निर्माण गरेका छन् ।